Siwiidiin - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:19 6 Fuulbaana 20214:19 6 Fuulbaana 2021
Akkaataa Siwidiin shakkamaa yakka waraanaa Iraan itti to'atte
Abbootiin alangaa Haamid Nurii ajjeechaa jumlaa Iraan bara 1988f himannaa irratti banan. Akkaataan itti to'atame akkana ture.
...tti maxxanfame 4:16 4 Fuulbaana 20214:16 4 Fuulbaana 2021
Lammiileen Siwiidin maaliif gibira kaffaluu jaalatu?
Ameerikaa dabalatee biyyoota baayyee biroo keessatti namoonni waa’ee gibira kaffalanii yoo komii dhiyeessan dhageenya. Lammiilee Siwiidiin baayyeen garuu faallaa kanaati. Gibira isaanii kaffaluu jaalatu.
...tti maxxanfame 4:49 29 Adooleessa 20214:49 29 Adooleessa 2021
Siwiidin ajjeechaa jumlaa hidhamtoota Iraan bara 1988'f lammii Iraan tokko himatte
Lammiin Iraan Haamid Nuur jedhamun himame kunis ajjeechaa jumlaa namoota wayita wal waraansa Iraan fi Iraaqiitti hidhaa irra turaniitiin himannaan irratti baname.
...tti maxxanfame 12:31 22 Waxabajjii 202112:31 22 Waxabajjii 2021
Siwiidiin seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf MM aangoorraa buqqifte
Paarlaamaan Siwidiin Ministira Muummee mootummaa biyyattii Istifan Lofviin amantaa irraa dhabuun aangoorraa buqqisuuf sagalee kenne.
...tti maxxanfame 4:12 10 Muddee 20204:12 10 Muddee 2020
Hakiima basaasummaan himatamee duuti irratti murtaa’e
Ahimadriizaa Djaalaalii oggummaan hakiima wal’aansaa hatattama yoo tahu, qondaalota Iraaniin Teeraan iddoo leenjii kennutti yeroo baayyee barbaadama ture.
...tti maxxanfame 10:26 4 Muddee 202010:26 4 Muddee 2020
Haati ilma waggaa 30 manaa akka hin baane godhan jedhaman bilisa bahan
Abbotiin alangaa Iswiidin dubartii ilma ishee manatti hidhuun himatamtee turte, ragaan ilmi ishee humnaan fedhii isaa malee mana keessa tursiifamuu agarsiisu hin jiru jechuun himannicha kuffisaniiru.
...tti maxxanfame 4:55 7 Adooleessa 20204:55 7 Adooleessa 2020
Artist Hacaaluu Hundeessaa Waxabajji 29, 2020 Wixata galgala Finfinneetti ajjeefamuun guyyaa Kamisaa bakka dhalootasaa Magaalaa Ambootti awwaalameera. Hiriyyaan waliin baratan waa'ee Haacaaluu maal jedha?
...tti maxxanfame 4:33 10 Waxabajjii 20204:33 10 Waxabajjii 2020
Siwiidin nama ministira muummee biyyattii ajjeese waggoota 34 booda adda baafatte
Bu'aan qorannoo ajjeechaa MM Siwiidin waggaa 34 gaafate har'a ifa ta'a
...tti maxxanfame 4:49 5 Amajjii 20204:49 5 Amajjii 2020
Biyya waa'ee qabeenya ofii odeessuun safuu itti tahe
Siwiidiin namoonni galii olaanaa aragatan keessa jiran haa taatuyyuu malee waa'ee horii isaanii ifatti dubbachuu garuu hin jaalatani